မေးလ် Mail.ru | November 2019
မကြာခဏဆိုဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအပေါ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါအခြေအနေများရှိပါတယ်သတင်းလွှာထံ၌စာရင်းသွင်းထားပါသည်, ဒါပေမယ့်ခဏအကြာတွင်ဤအချက်အလက်မရှိတော့စိတ်ဝင်စားသည် ဖြစ်. , မေးခွန်းပေါ်ပေါက်: spam များကိုမဆိုကြင်နာထံမှနှုတ်ထွက်ဖို့ဘယ်လို? အဆိုပါ Mail.ru မေးလ်, သင်ကလစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ကအားလုံးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမေးလ်ထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျကနေနှုတ်ထွက်ဖို့။
A "ကိုမိုးတိမ်အ Mail.Ru »ဖန်တီးလုပ်နည်း
Mail.Ru သငျသညျ2GB ကိုများနှင့်ဖွင့်ဖို့ 8 GB ကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်အထိတာဝန်ခံတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီအခမဲ့မဆိုဖိုင်အရွယ်အစားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ cloud storage ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးပါသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖန်တီးချိတ်ဆက်ဖို့ပုံ "မိုဃ်းတိမ်ကို" ပါသလဲ ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရကြပါစို့။ Mail.Ru အတွက် "တိမ်" Creating မေးလ်ကနေအွန်လိုင်းဒေတာသိုလှောင်မှုအားသာချက်ကိုယူပါ။
ယာယီမေးလ် Mail.ru သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
မကြာခဏသငျသညျဖိုင်တစ်ခုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးမေ့လျော့ဖို့သာဆို site ပေါ်တွင် register ဖို့လိုအပ်သည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ သို့သော်အခြေခံက e-mail ကိုသုံးပြီးသင် site ၏သတင်းလွှာစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်စာတိုက်ပုံး clogs ကြောင့်မလိုအပ်သောနှင့်စိတ်မဝင်စားအချက်အလက်များ၏တစည်းရပါတယ်။ မေးလ်။
Mail.ru အပေါ်မေးခွန်းတစ်ခု Creating
ဝက်ဘ်ဆိုက်Ответы@Mail.Ru - အသုံးပြုသူများကိုမေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်သူတို့စကားကိုနားထောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု Mail.ru ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့နေ့စဉ်အကြောင်းကို6သန်းကသွားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ စီမံကိန်း၏အဓိကစိတ်ကူးရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်, အစစ်အမှန်အသုံးပြုသူအဖြေများ၏တိ၏လျော်ကြေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းကအမည်ရ 2006 ခုနှစ်, ဆိုက်သစ်တစ်ခုခေါင်းစဉ်၏ကနဦးဖြစ်လာစီအသုံးပြုသူတက်ဖြည့်နိုင်မအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။
Mail.Ru ပေါ်တွင်သင်၏မေးလ်ကို log in ကိုဘယ်လို
Mail.Ru ထံမှအီးမေးလ် RuNet အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကစာတိုက်ပုံးများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများကဖန်တီးမှတဆင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအချို့သောအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ မေးလ် box ကိုမေးလ်ထဲသို့ log မှ Mail.Ru က e-mail ကိုမှဝင်ပေါက်နည်းလမ်းများ။
မေးလ် Mail.ru အပေါင်းတို့၌အက္ခရာဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
လူအတော်များများဟာစာတိုက်မှာအားလုံးစာလုံးကိုဖျက်ဖို့ဘယ်လိုအံ့သြနေကြသည်။ ဒါဟာတကယ်သင်ကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအတွက်မှတ်ပုံတင်ဘို့တစာတိုက်ပုံးကိုအသုံးပြုဖို့အထူးသဖြင့်လျှင်, တစ်လိမ်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင့်အီးမေးလ်ကို spam မက်ဆေ့ခ်ျရာပေါင်းများစွာ၏ repository ကိုဖြစ်လာသင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်တွဲကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုမသိကြပါလျှင်၎င်းတို့၏ဖယ်ရှားရေးအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။
စာတိုက် Mail.Ru မှာစာလုံး၏နည်းလမ်းများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပြန်ရုပ်သိမ်းအများအပြားကိစ္စများတွင်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်အဆိုပါ Mail.Ru အီးမေးလ်စာတစ်စောင်ကိုစေလွှတ်။ , နေ့စွဲရန်, ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအရန်မေးလ် client ကိုသို့မဟုတ် optional ကိုအင်္ဂါရပ်လိပ်စာအဖြစ်ပြုမူအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောတိုက်ရိုက်ဒီ feature မပေးပါဘူး။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ မေးလ်သို့စာပို့ရန်မှရုပ်သိမ်းခြင်းအက္ခရာ။
ဘယ်လို Mail.ru မှစာတစ်စောင်ပေးပို့ဖို့
ထိုသို့ထွက်ခွာသွားရေးသားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်ထင်ရပေသည်။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာထိုသို့ပြုမှမည်သို့အများအပြားအသုံးပြုသူများကိုမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့ service ကိုအသုံးပြုမယ့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေး Mail.ru. အဆက်အသွယ်ရရန် Mail.ru တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖန်တီးပါ, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်မေးလ်ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ log ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဝေးလံခေါင်သီစာတိုက်ပုံး Mail.Ru Restoring
ယနေ့အထိသာအချို့အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု Mail.Ru. ပါဝင်သည်သောဖျက်ပစ်အကောင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်နိုင်စွမ်းပေး ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျးဟာအံဆွဲမဖယ်ရှားမီစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏အတော်ကြာအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ဒီတူညီတဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာတော့ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုအကောင့်ကိစ္စတွေပြန်၏နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်။
Mail.ru password ကိုမီးစက်ကနေအွန်လိုင်း
Password Generator ကိုနံပါတ်များ, အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများ၏စာလုံးသေးခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောသင်္ကေတတစ်ခုခက်ခဲပေါင်းစပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အကောင့်လုံခြုံရေးသေချာစေရန်အလို့ငှာတိုးမြှင့်ရှုပ်ထွေးမှုစကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ချင်ဘယ်သူကိုမှအသုံးပြုသူရဲ့တာဝန်ရိုးရှင်းစွာ။ Mail.ru လူကြိုက်များက်ဘ်ဆိုက်သင်သည်မည်သည့် site ပေါ်တွင်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုများအတွက် password ကို generate မှခွင့်ပြုပါတယ်။
E-mail ကို Mail.ru ၏ password ကိုပြောင်းခြင်း
သင်ဝန်ဆောင်မှု Mail.ru အပေါ်မေးလ် box ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ရာသံသယရှိပါကအဖြစ်မကြာမီပြောင်းလဲပစ်ရန်တတ်နိုင်သမျှသူ့ထံမှစကားဝှက်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ထိုသို့ပြုမှအတိအကျဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ Mail ကိုအကောင့်အဖြစ်မေးလ် Mail.ru ရဲ့ login အတွက် password ကိုပြောင်းပါ။
Mail.ru အတွက် SMS ကို-အကြောင်းကြားစာများ၏ setting ကို
SMS ကို-ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ - ဒီ Mail.ru. နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသောအတော်လေးတစ်နေရာလေးကိုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပါသည် သင်မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရောက်ရလိမ့်မည်ဆိုပါကအစဉ်အမြဲသိရန်ကသုံးနိုင်သည်။ ဤသည်ကို SMS ပုကသူသည်စာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်သငျသညျလုံးဝကဖတ်နိုင်ရှိရာ link ကိုအကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပါရှိသည်။
ထောက်ခံမှု Creating Mail.Ru မေးလ်ခေါ်ဆို
အင်တာနက်ရုရှားအစိတ်အပိုင်းအတွက် Mail.ru e-mail, ဝန်ဆောင်မှု features တွေအများကြီးနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲလုံလုံလောက်လောက်ကြံ့ခိုင် e-mail လိပ်စာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးချင်းစီပြဿနာများကိုပညာရှင်များ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲရိုးရှင်းစွာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို fix, သူ၏အမှုအမျိုးမျိုး၌ပျေါပေါကျနိုငျသညျ။
ဖြေရှင်းချက်: Mail.ru မေးလ်ဖွင့်မရ
ဒါဟာ Mail.ru မေးလ်တည်ငြိမ်မဟုတျကွောငျးအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏဝန်ဆောင်မှု၏မမှန်ကန်ကြောင်းအလုပ်သုံးစွဲသူများထံမှတိုင်ကြားချက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်မရအမြဲပြဿနာ Mail.ru. ၏ဘက်မှာဖြစ်ပွားနိုင်သည် တချို့ကအမှားတွေသငျသညျမိမိကိုယျကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ e-mail ကို၏စစ်ဆင်ရေးပြန်လာလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုကိုကြည့်ကြရအောင်။
"တိမ်တိုက် Mail.Ru »သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
"Mail.Ru နှင့်အတူမိုးတိမ်" မျိုးစုံပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဆင်ပြေ cloud storage က၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးထားပါတယ်။ သို့သော်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများဝန်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏သင့်လျော်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းတဲ့အတွက်အချို့အခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးလ်ကနေ "တိမ်" ၏အခြေခံစွမ်းရည်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, အဘယ်သူမျှမစာတိုက်ပုံး hacking နှင့် "hijack" မှလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုသင့်ဒေတာသိတော့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ရုံစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်, အီးမေးလ် recover လို့ရပါတယ်။ သင်ရုံကမေ့လျော့နေလျှင်အပြင်, ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Windows ပေါ်မှာ Mail.ru မေးလ်ချိန်ညှိခြင်း
E-mail, client များ - သင့် Mail.ru e-mail, အကောင့်လာမယ့်မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, သင်နှင့်အထူးဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်နိုငျသညျ။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားနှငျ့သငျ, လကျခံရရှိပေးပို့နှင့်ဘဏ္ဍာမက်ဆေ့ခ်ျမှခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော် Windows ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအီးမေးလ်ဂလိုင်းထူထောင်ဖို့ဘယ်လိုမှာကြည့်ရှုမည်။
တစ်ဦးစာတိုက်ပုံးကိုဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်လူကြိုက်အများဆုံးန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ, ငါတို့သည်အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်သင်ပြောပြကြလိမ့်မည်သည့်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရက်နေ့တွင်, Mail.ru ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို Mail.ru Mayl.ru မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးစာတိုက်ပုံးကိုဖန်တီးရန်သင်၏အချိန်နှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအများကြီးယူမထားဘူး။ ဒါ့အပြင်, အီးမေးလ်အပြင်, သငျသညျ, သငျသညျ chat နိုင်မည့်ကြီးမားသောလူမှုကွန်ယက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်မိတ်ဆွေအမြင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ, ဂိမ်းများဆော့ကစား, သင်ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည် "မေးလ်အဖြေများ။
ငါရဲ့ login Mail.ru မေ့လျော့နေလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်
ငါသည်သင်တို့၏အီလက်ထရောနစ်စာတိုက်ပုံး Mail.ru ၏စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့နေလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုသင့်သည်, နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ရဲ့ login အီးမေးလ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်ဘာလုပ်သလဲ ထိုသို့သောအမှုများကိုမကြာခဏဘာလုပ်ရမှန်းမသိသောအများအပြားရှိပါတယ်။ ခလုတ်တစ်ခုပြီးနောက်ဤနေရာတွင်စကားဝှက်နှင့်အတူအမှု၌ရှိသကဲ့သို့။ သင်တစ်ဦးမေ့လျော့မိတ်ဆွေ access ကိုပြန်လည်ပေးနိုင်ပုံကိုကြည့်ကြရအောင်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: မေးလ်လိပ်စာအပေါ် Password ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ။